महिला फुटबल : नेपालले भारतलाई जित्न सक्ने के-के हुन सक्छन् आधार ? - Nepal Bahas Nepal Bahas
महिला फुटबल : नेपालले भारतलाई जित्न सक्ने के-के हुन सक्छन् आधार ?
प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७५, बिहीबार १८:४९
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली महिला फुटबल च्याम्पियनशिपमा नेपाल र भारतबिच चौथो पटक उपाधिका लागि भिडन्त हुँदैछ विराटनगरको शहीद मैदानमा शुक्रवार हुने फाइनल खेल अगाडि दुवै टोलीका प्रशिक्षकहरूले जित्ने दाबी गरेका छन्।
भारतीय प्रशिक्षक मायामोल रक्कीले भनिन्, ‘हरेक प्रतिस्पर्धा नयाँ हो र हामी विगत वा इतिहासमा विश्वास गर्दैनौँ।’ प्रतियोगिताको पाँचवटै संस्करणमा भारतसँग पराजित भएको नेपाल पनि इतिहास बिर्सन चाहन्छ। बरु पहिलो पटक नयाँ इतिहास कोर्ने आत्मविश्वासका साथ मैदानमा उत्रिने तयारीमा नेपाल देखिएको छ।
प्रशिक्षक हरि खड्का भन्छन् ,’ हामी अहिले यस्तो अवस्थामा छौं। जहाँ खुलेर भन्न सक्छौँ की परिस्थिति इतिहास विपरीत हुनेछ। नेपाली टोली जितको लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिन सक्षम छ। त्यो नयाँ इतिहास भोलि लेखिनेछ।’ विहीवार दुवै टोलीका सदस्य एवं अधिकारीहरूले रमाइलो गरि होली मनाए पनि शुक्रवार भने दुवै टोली एकअर्कालाई हराउने दाउमा छन् ।
आत्मविश्वास:प्रशिक्षक हरि खड्काका अनुसार पहिलोपटक महिला खेलाडीहरूमा आत्मविश्वास चुलिएको छ। भारत बलियो छ भन्ने ‘मनोवैज्ञानिक डर’ हटेको छ। दुई महिनाको बिचमा भएको दुईवटा भेटमध्ये ओलिम्पिक छनोटमा १-१ गोलको बराबरी तथा भारतमा भएको चार देश सम्मिलित हिरो कपमा पाएको २-१ को विजयले पनि उनीहरूमा हौसला थपेको छ।
घरेलु दर्शक: विराटनगरको शहीद मैदानमा आशा गरिए झैँ फाइनलमा ओइरिने नेपाली समर्थकहरूको साथ र ुहुटिङु नेपालको थप शक्ति बन्ने विश्वास गरिएको छ। कप्तान निरु थापाले त्यसको लागि दर्शकसँग आग्रह गरिसकेकी छन्।
कमजोरी के होलान्
कमजोर रक्षापंक्तिस् दायाँ रक्षा क्षेत्र नेपालको सबैभन्दा कमजोर पक्ष मानिएको छ। उक्त क्षेत्रबाट खेल्ने भारतीय ुवींगरु सञ्जु निकै तेज गतिकी भएकाले दायाँ रक्षा क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्ने देखिएको छ।
अनुभवको कमी : भारतको दाँजोमा नेपाली टोली अनुभवी हुँदै होइन। टोलीमा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता छ। बढी दबाब झेल्ने वा अग्रतालाई कायम राखिराख्ने विषयमा अनुभव नपुग्दा केही न केही समस्या पर्न सक्ने जोखिम कायम छ। जस्तै सेमिफाइनलमा विपक्षीको कडा निगरानीमा परेकी सावित्रा भण्डारीले त्यो जालो तोड्न सकेको देखिएन।
अपरीक्षित : प्रतियोगिताभरि एक गोल पनि नखाएको नेपालको रक्षापंक्ति र गोलकिपरको प्रतिभाको वास्तविक परीक्षा हुन बाँकी नै छ। सेमिफाइनलमा विपक्षीले गरेको एउटा ुकाउन्टर एट्याकु डरलाग्दो थियो। जसलाई नेपाली रक्षकले मुस्किलले रोके।
शारीरिक अवस्था : भारतको दाँजोमा नेपाल यसमा केही कमजोर देखिन्छ। भारतका उत्कृष्ट देखिएका स्ट्राइकरहरूको आक्रमण निस्तेज पार्न नेपाली खेलाडीहरूको गति निकै सुध्रिनुपर्ने देखिन्छ।
शुक्रवार भोली हुने फाइनल प्रतिस्पर्धालाई कतिपयले निकै रोचक रूपमा सम्पन्न हुने विश्वास गरिरहेका छन्। कतिपयले भारत हरेक क्षेत्रमा नेपालभन्दा माथि छ पनि भनेका छन् । तर नेपालले जितको लागि मेहनत नै गर्नै पर्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय फुटबल टोलीबाट नियमित खेलिरहेका दुई खेलाडी अष्ट्रेलिया पुगे